iBooks Munyori yakagadziridzwa kuti ishandise 2.5 ine matemplate matsva uye zviwanikwa | Ndinobva mac
iBooks Munyori yakagadziridzwa kuti ishandise 2.5 ine matemplate matsva uye zviwanikwa
Pamwe nekusunungurwa kweiyo yekupedzisira vhezheni MacOS Sierra, Apple yakagadzirisa vhiki ino iBooks Munyori, kusvikira 2.5 version. Ndiyo chikuva chinotendera vanyori kugadzira mabhuku kana emanyorero uye izvi zvinoburitswa muchitoro cheBooks.
Kana iwe wakagara uchiedzwa kuti utaure iyo nyaya iyo iwe yaunofunga yakakosha kana uchida kutaura nezvenyaya yaunoda kuzivisa. iyo iBooks Munyori kunyorera kunokutendera iwe kuenzanisira chinyorwa chako iine yakanyanya graphic zviwanikwa, mifananidzo kana inonakidza mafoto.
Mabasa matsva anounzwa neshanduro iyi ndeaya:
Matemplate matsva ekugadzira anopindirana ePub mabhuku.
Shambadzira kuBooks uchishandisa Apple ID ine Mbiri-Nhanho Kusimbisa yakavhurwa
Yakagadziridzwa bhuku kutsikisa maitiro panzvimbo yevazhinji vatengesi
Kuita uye kugadzikana kwekuvandudza.
Ichi chingave chiitiko chidiki, asi ndiyo iyo tsanga dzejecha iyo Apple inounza kunyika yekudzidzisa. Izvi zviri kuwedzera kune nyowani basa re chaiyo-nguva kubatana iyo yakataurwa munguva yakapfuura Keynote yeWork mafomu kune ese Mac uye iOS.
Kana iwe uchiziva nezveApple's iWork application, unogona kufungidzira kuti zviri nyore sei kugadzira rako rekutanga kuburitsa. Kutenda kune kushandiswa kwetemplate, tinogona kusarudza inonyanya kukodzera pabasa redu. Kusanganisira mifananidzo uye zvinyorwa zviri nyore sekudhonza uye kudonhedza.
Asi kwete chete izvo zvinhu izvi zvinogona kuiswa nekukurumidza. Izvo zvinoita zvakare kushandisa Multi-Kubata majeti kusanganisa zvinofambidzana zvemukati: mavhidhiyo, mharidzo yekutaura kana 3D zvinhu. Iwe unogona zvakare kutarisa chero nguva, ndeupi mhedzisiro unowanikwa pane ese maMac uye a iOS mudziyo. Chekupedzisira, ikozvino inosanganisa mukana wekushandisa iyo Kuongorora kweApple-nhanho, kuitira kuti mumatanho mashoma akapusa iwe ubudise basa rako muBook Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » iBooks Munyori yakagadziridzwa kuti ishandise 2.5 ine matemplate matsva uye zviwanikwa
5 shanduko kana nhau dzinogona kusvika kune iyo Pro Pro renji
Maitiro ekuisa yechitatu-bato maapplication kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira pane macOS Sierra